Zvimwe zvekufungisisa, semurapi wekutaura, pabhuku "Izwi roga roga randaiziva" naAndrea Vianello | Kudzidziswa Kwekuziva
Andrea Vianello mutori wenhau uye muterevhizheni weTV. Hupenyu hwake hunoramba huchienderera kusvika, mamwe mangwanani, carotid yake yabvaruka, ichidzivirira ropa kuti risasvika muuropi. Mushure mekupindira kwakasimba, Vianello anozviwana aphasic: akarasa mutauro wake. Bhuku Izwi rega rega ndaiziva inotaura nezverwendo rwake, kubva mangwanani echiitiko kudzoka kwake kumba, achipfuura nepachipatara pekugara kuti apore kuSanta Lucia.
Avo vanoshanda mumunda wekurapa kwekutaura kurapa, mushure menguva pfupi, vanopinda "zvakajairika" uko murwere ane mutauro, kuverenga kana kunyora zvinomiririra, muchokwadi, zvakajairika kwete kunze kwekusiiwa. Iri bhuku, kune rumwe rutivi, rinotaura aphasia yakaonekwa kubva mukati. Kusiyana nedzimwe mamiriro akaita semamwe mamota europi kana iyo dementias, ischemia chiitiko chakaoma, icho munguva pfupi chinokanganisa hupenyu hwemunhu: tinochiona, semuenzaniso, mundima umo Vianello anotarisa meseji dzenhare dzakagamuchirwa nezuro wacho asina kukwanisa kupindura.
Chimwe chinhu chekufungisisa nezvacho, kubva pakuona kwechiremba, ndechekuti, mune yatakakurukura "yakashandurwa hupenyu hwezuva nezuva", isu tinotora sezvisina basa nhevedzano yakazara yemafungiro akasarudzika uye mazwi (apraxia, kuregeredza, paraphasia) izvo, zvinopesana, zvinomiririra nzvimbo isingazivikanwe nevarwere. Kunyangwe avo avo, semutori wenhau, vanga vachishanda nemutauro kwehupenyu hwese uye vachirarama chaizvo nemazwi, vanogona kunge vasina kumbosangana mumatanho anoshanda emutauro, mune nzira dzekuziva kwekutaura, kuverenga uye kunyora: runako rwemutauro wakanyorwa uye wemuromo, muchokwadi, ndiko kupfava kwekuuraya uye, kudzamara chiitiko chakadai seschemia chikaitika, tinozvitora sezvakadai sekufema. Kune izvi zvakafanira gara uchitora nguva yako wotsanangura: murwere anoenda bofu, achiteedzera chete kuraira kwachiremba, anozowana nguva yakaoma yekunzwisisa zvinorehwa nezviitiko zvese zvakarongedzwa, uye haazokwanise kuwana nzira dzakazvimiririra. Sekutaura kwaSeneca, hapana mhepo yakanaka kune mutyairi asiri kuziva kwekuenda
Pakupedzisira, ndima iyo Vianello akamirira achishushikana murapi wekutaura yakanga ichindibata kwazvo, kusvika pakatanga kumutarisa kumativi eSanta Lucia mushure memaminetsi mashoma kubva pakutanga kwekufungidzirwa kwechikamu chake. Hatifanire kukanganwa kuti varwere vangani, kunyanya vezera rekushanda, kuisa tariro yavo kutaura Therapy kutanga kutaurirana nekushanda zvakare, netariro sepakutanga. Kwavari zvakafanira kupira 100% yehunyanzvi hwedu, kutarisisa kwedu uye kwedu kuedza, kunyangwe hazvo chokwadi chekuti hupenyu hwachiremba hwakagadzirwa, souhwo hwevamwe vanhu, hwematambudziko emunhu uye kunyanya akabatikana mazuva.
Aphasia haina chete yekushushikana asiwo mutengo wehupfumi kumurwere nemhuri yake. Vamwe vanhu, nekuda kwezvikonzero zvehupfumi, vanogumira mikana yavo yekuvandudza, kunyangwe paine humbowo hunotsigira kudiwa kwebasa rakasimba uye rinogara riripo. Neichi chikonzero, kubva munaGunyana 2020, maapplication edu ese anogona kushandiswa mahara online mu GameCenter Aphasia uye edu emashizha mashitsi anowanikwa pano: https://www.trainingcognitivo.it/le-nostre-schede-in-pdf-gratuite/
Mukuvimba kuti kuwanikwa kwemahara kwezvinhu izvi kunogona kubatsira avo vanozvida kuti vapore nekukasira uye zvakakwana.
aphasia, Kurohwa, ischemia, mutauro, mazwi ese ndaiziva, nhaurwa, kutaura kurapwa kurapa, vianello
Zvimwe zvekufungisisa, semurapi wekutaura, pabhuku "Izwi roga roga randaiziva" naAndrea Vianello2020-09-242020-12-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-23_22-49-20.jpg200px200px
Aphasia uye kudana zita: zvirinani kutaura kwemuromo kana kunyorwa?
Ko kana murume aisuka ndiro? Iyo itsva vhezheni ye "Cookie Kuba"
Verbal apraxia mune vanhu vakuru: maviri mafungidziro akaenzaniswaaphasia